Outdoor LED ambanin'ny tany fahazavana mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Street Light > LED ambanin'ny tany fahazavana > Outdoor LED ambanin'ny tany fahazavana
Outdoor LED ambanin'ny tany fahazavana
IP65 ivelnyn'ny trnyno lnylnynny jiro 5w recessed mnynodidinny undergmnynodidinny LED rgb fnyhnyznyvnynny mpnymnytsy nyry mpnynnymbonytrny Lnyngxu mijery hnyndroso ny ny fividinynnynny, isikny diny mnynome inynnyo nymin'ny ny chenyp pricelist nyry ny tsara indrindra quotnytion for inynnyo!
1- azo zatra 12v 24v 3w 9w 18w IP67 jiro ambany ambanin'ny jiro RGB Landscape Linear LED Inground Light
2- Lens-karazana tariby dia manome betsaka na dia ny fizarana maivana aza, indrindra fa amin'ny fividianana RGB
3- Ny karazan-jiro mifehy ny vondron-jiro samihafa ho an'ny loko tokana sy ny fametrahana RGB
4- Miaraka amin'ny haben'ny samy hafa mpamily ho an'ny fampihenana volonta ambany sy fampandoavam-bola ambony amin'ny volonta avo, misy safidy roa ho an'ny haavon'ny famoahana.
5- RGB Controller, CRL02D3M na CRL02D3E dia atolotry ampiharina amin'ity vokatra ity amin'ny fanovana loko.
Q1. Afaka mahazo baiko ohatra ho an'ny jiro mitarika ve aho?
Q2. Ahoana ny amin'ny fotoana fitarihana?
A: Mila ohatra ny 3-5 andro, ny fotoana famokarana faobe dia mila 1-2 herinandro hanaovana ny habetsahany mihoatra ny
Q3. Misy fetrany MOQ ve ho an'ny filamatra maivana?
A: MOQ ambany, 1pc ho an'ny fisavana santionany no misy
Q4. Ahoana ny fomba andefasanao ny entana sy firy andro vao tonga?
Q5. Ahoana ny fomba hitondrana baiko ho an'ny taratra mazava?
A: Ampahafantaro anay ny zavatra takinao na ny fampiharana anao.
Faharoa, manonona ny zavatra takinao na ny soso-kevitrao izahay.
Ny fahatelo ny mpanjifa dia manamafy ny santionany sy ny fametrahana ny tahiry amina lamina ofisialy.
Fahefatra Isika dia mandamina ny famokarana.
Q6. Mety ve ny manao pirinty ny mari-pamantarana ao amin'ny vokatra maivana?
A: Eny. Azafady mba ampahafantaro anay amin'ny fomba ofisialy alohan'ny famokarana ary hamafiso aloha ny famolavolana miorina amin'ny santionany.
Q7: Ianao ve manome tolotra ho an'ny vokatra?
A: Eny, manolotra fiantohana 2-5 taona izahay amin'ny vokatra.
Q8: Ahoana ny fomba hiatrehana ny lesoka?
A: Voalohany, vokarin'ny vokatra fanaraha-maso kalitao henjana ary ny tahan'ny fatiantoka dia ambany noho ny 0.2%.
Faharoa, mandritra ny vanim-potoana hiantohana, handefa jiro vaovao misy filaminana vaovao izahay amin'ny habetsany kely. Fa
Ny vokatra batch deficien, hanamboatra azy ireo izahay ary hanome azy aminao aminao na azontsika atao ny miresaka momba ny vahaolana i
ncluding fiantsoana araka ny zava-misy marina.
Hot Tags: Outdoor LED ambanin'ny tany mazava, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style
ivelan'ny trano lalana LED ambanin'ny tany jiroIP65 LED ambanin'ny tany fahazavanarecessed manodidina LED undergmanodidina fahazavana5w LED ambanin'ny tany fahazavana